June 3, 2020 NEWS 13
BAARGAAL(P-TIMES) – Ciidamo katirsan kuwa Daraawiishta ee Puntland, kuna suganaa gobalka Gardafuu ayaa sheegay in ay kubiireen ciidamada DF Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay xaquuqdoodii ka waayeen Xukuumadda Puntland, iyagoo sheegay in ay horey u tirsanayeen dhibaatooyin badan.
Waxaana horey guddiga Dibu-habeynta ciidamada Puntland ay diideen in ay gobalkaas tagaan oo ay kasameeyaan Tirokoobka ciidanka, waxaana guddigan hogaminayay wasiiradda Maaliyada Xassan Shire Abgaal & Amniga Cabdisamad Galan.
Guddiga ayaa xiligaas codsaday in ay ciidamada Gardafuu yimaadaan gobalka Barri deegaano katirsan, maadaama deegaanadaas aysan laheyn wadooyin si fudud lagu gaari karro.
Is abaabulka ciidanka, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya oo ku wajahan dhaqdhaqaaqooda waqtigan waxa ku soo beegay, balse dadka deegaanka qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa tabasho muujiyey.
Reer Calawla waxay ka mid yahiin dadka run mooday Durbaan tunka xamar.War xamar haddii ay agab iyo wanaag leedahay ayadaa laga arki lahaa.
Waagii Qixii xamar dadka lagu qashay waxaa jirey dad asalkoodii hore ahaa reer Gardafuu oo daganaan jirey xamarweyne oo loo yaqiin reer xamar iyo shaashi.Laakiin waagoodii hore waxay ka yimaadeen Calawla.Dadkaasu qixii hore bay xamar ka soo guureen oo ay ku soo guureen 49 baabuur.Dhanka puntlaan bayna soo aadeen.Markay soo gaareen Jeente kun dishe ( baladweyne)baa dadkii baabuurtii lagala dagay oo la laayey.Maalkii iyo baabuurtii ay wateena laga qaaday.Ujeedadaydu waa kuwo an waxba ogeeyn dadka reer puntlaan ee xiligaan xamar u hanqal taagaya.War xamar waa lagu kala guuray.Wixii looga kala guurray baana wali taagan oo an la xalin.
Tan kale waxaa dhicikarta askarta la leeyahay way gadoodeen in aysan ahayn reer Gardafuu ee ay yahiin dadkii awalba hadba meel aadi jirey.
DADKU WAXAY CAADO IYO DHAQAN KA DHIGTEEN HADII AAN LACAG LAYSIIN DADKAYGA, DEEGAANKAYGA,AMNIGA DALKAYGA, OO TUUTAHA IYO HUBKA LAYSIIYAY BAAN KALA HOR IMAANAYAA OO UGU ADEEGAY WAA DANBIILAYAAL, WAA IN LA DILAA AMA LA SOO XIRAA, XATAA SAXAAFADA U KASHAQAYSO KHALKHAL GELINTA AMNIGA, OO ABAABULO WAR AAN RAAD LAHAYN IYO MEEL LAGA SOO XIGTAY XATAA UUSAN AHAYN GOOBJOOG
Nimankani waxbay qarinayaan, waxay Ku doodayaan ciidanka baddu ma imaankaro gardafuu, waxayna markasta ka qaylyaan maraakiibta jariifka, waxaan filayaa in meeshaas hub uga soo dego daacish ama kooxo kale. Meeshaas sirdoon haloo diro tobanka nin ee safani qorshe laga dameeyo ayay meesha isu soo tubeen.
Somali maskaxiyan waa dad waalan.Maamulada qabaailka Villa Xamar ayay baad ugu waraysano yihiin,maleeshiyaadka beelahana baad bay raadinaayaan.
Gardaguul Sawaaqroon 50 nin ka badan lagama heli karo ha iska qaylinayaan Puntland MS ayaa iska leh waliba MJ yaryarka yaan la idilin sidii reer Maxamuud 1992.
Kkk ciidanka Gardafuul EX burcad badeed hadii ay rabaan inay ka mid noqdaan ciidanka Puntland waa inay ogolaadaan in dhaqan celin loo sameeyo lana tababaro si ay uga mid noqdaan ciidanka Puntland ee diiwaan gashan. Puntland waa dhamaatay wakhtigii beenta wax lagu qaadan jiray oo nin walboo tuuladiisa joogaa oranjiray askari baan ahay isagoo kaluunkiisa dabta sidaasna uu mashahar ku qaadan jiray sida wiilka foront line ku jira oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka. Nmanka waxay yiraahdeen gudiga dibu habaynta ciidanka Puntland wuxuu noo sheegay inaanu tagno gobol ka bari Acadimiyada Carmo si naloogu tababaro waanuna diidnay. Sideedaba horta askari is waa inuu amarka qaataa haduu amardiido sameeyo waa danbi wayn waa hadaad askar rasmiya tihiin hadaadse malayshiyaad Ex burcadbadeed ah tihiin dowlada Puntland shaqay idinka qabanaysaa ee ogaada. Waa dhamaatay wakhtigii caaglaha iyo beenta wax lagu cuni jiray adeer Puntland ciidankeeda way dhistay waana ciidan active ah oo tababar qaatay diiwaan gashan una hogaansan awaamiirta madaxdooda. Hadii beentii aad Puntland waxkaga cunijidheen idinka soo oodantay inaad Farmaajo iyo xamar gacanta u taagtaan si aad beentiinii wax ugusii cuntaan. Farmaajo qudhiisa ayaa qaata ka jooga caagle hadba meel kasoo hadla oo ciidan u sheegta.waxaa idinka idiinka horeeyay dhowr malayshiyaad oo sidiina oo kale Goldogob ka hadlay markii ay diideen inay tagaan xeyaha ciidamada Puntland lagu tababarayo cid la hadashay iyo cid xamar wax ugasoo didhayna majidho.
Budhlayn waa budh-budhay hadii eebe idmahayo.
Xaaraami Futo Case cadhadaada u sheeg waxaad sheegaysid.Waxad tahay Inan Gumeed an soomaaaliya deegaan ku lahayn oo beelkale calaal ku ah,madiidina u ah.Maadaama ad tahay ruux aad u aqlaaq xun waad mudan tahay in lagu yiraahdo waxa ad tiraahdid oo kale.Puntlaan maxaad ka qaadi kartaa Daciif yahoow ay xumaanta iyo xaasidnimadu buux dhaafiyeen.waana aqaan adigoo kale oo malaha waxaad ka mid tahay kuwa marduufka loo tuuro oo la yiraahdo soocay dad Hebal.Doqon yahoow halkaas la fadhi cay iyo ceeb.Puntlaan waxaa waxba ka qaadi waayey SNM iyo USC ee xaggee baad adigu joogtaa neef yahoow liitaa.
Dhabayaco waa Ku daysay & maamulkii madheedheenia kkkkkkkkkkkkkk kkkkk kkkkkkkkkkkkkk
Ibrahim iyo hanuniye
Waxaa tihin laangaabyada SNM saadka ay duudka uga rarato.
Horta hore isisoo xoreeya kadib raga soo hor fariista . Marka aad tihiin dumarka ama labeebka hasoo dhaafina xaargeeysa
Waxaa kuu fiican in aad si asluub leh u soo rayi dhiibatid.Haddi ad dad u gaftid adigana waa laguu gafayaa.Umana adkaysan doontid nabarada kugu soo dhici doona ee Lab iyo Dhadig kaad tahayba is jir oo cidna ha u gafin mar dambe.Dadka ad tiri way u dhammaatay arimahooda Waxaa gacanta ku haya Allaah(swt).Adiga oo ah xaasid daciifa waxba uma dhibi kartid.Waxayna u dhammaatay kan wadankiisa siistay dhawr marduuf oo Caleen ah.
“Farxiyo” iyo “Dab Casar” waa isla odaygii “Yoocada” iyo magacyada badan ee badan dadka ku weerara. Ma aha haweenay iyo wax ku dhow toona sida aad u maleysay ee la soco saaxiib.
salaam: 30 million of lagu tala galey in Pl lagu dhawaco baa soo gartay miyaah. Hadde ha ogaladan in QAQAM IYO QADAADWEYN diyaarado loogu keeno. Dadna waxay ku mashquulsan yihiin in waddoyinka loo dhiso kuwaana waxaas bay kuwaanuna la soo shaac tagayaan.
macquul ilama aha inay ciidan katirsan dowlada puntland si fudud ugu biiraan DF,
Malaha ciidan daacad ahba ma ahayn awalba!,
Tagtaye Yaa Ku Tabey,!!!.